Waxaa jira sababo badan oo keeni kartaa user ah in ay lumiyaan maktabadaha Lugood. Luminta maktabadda Lugood waa dhacdo caadi ah, waana sababta users waxa laga codsanayaa inay abuuraan nusqado badan oo ka mid ah maktabadda Lugood. Dadka qaarkood waxay u muuqan yaabaa in sida waqti lumis, laakiin ka dib markii ay maktabadda lumin in marka ay bartaan muhiimadda haysashada hayaan sida badan intay karaan. Users waayi kartaa maktabadda haddii ay dhacdo:
Waxay drive adag shilalka iyo maktabadaha dhan waxaa laga badiyay
Rakibaadda nidaamka cusub qalliinka
Inta lagu guda jiro u hagaagsan iyo xogta lumo
Haddii user qabanayo dib warshad in iDevice ah
Sidee inuu ka soo kabsado Lugood maktabadda ka qalab macruufka
Maxaa la sameeyaa haddii aadan dib of Lugood leeyihiin
Soo Celinta Lugood maktabadda la TunesGo
Bandhigyada u hagaagsan waa habka ugu fudud oo kaa caawin kara user ah inuu ka soo kabsado xogta maktabadda Lugood ah in xeeladdiisii ​​uu. Apple mishiinada ku shaqeeya waafajinta karaa Lugood si ay u soo kaban dhabarka qaybaha lumay maktabadda. Qaadashada isticmaalka TunesGo sida tusaale, user ay u baahan doonaan in.
Talaabada 1: . Connect qalabka iyo abuurtaan TunesGo.
Talaabada 2: . A suuqa kala furi doonaa oo soo xuli doona maamuli maktabadda Lugood.
Talaabada 3: menu jiido hoos A furi doonaa ka dibna dooro dhiska maktabadda marka diyaar, waxaad dooran kartaa bilaabatay.
Haddii mid ka mid seego isticmaalaya Lugood 11 iyo ka dib waxaa laga yaabaa in ay suurtogal tahay tan iyo markii ay muujiyo gadashada ee la soo dhaafay la xiriir daruur inay sii qulquli ama soo guurin. Tallaabooyinka soo socda ayaa la raacayaa waa in haddii aad rabto in aad si buuxda u bogsadaan ee la soo dhaafay qaar ka mid ah files lumay haddii aad gurmad lahayn.
Laga soo bilaabo hore Lugood maktabadda files waxaa laga yaabaa in tiro ka mid ah maktabadaha Lugood taariikhaysan. Qaado dhawaan faylasha, iyaga paste maktabadda Lugood iyo magaca sida maktabadda Lugood. Bilow Lugood iyo content oo dhan ka muuqan doontaa. Waa in aadan guji file kasta dhawaan tan iyo markii ay hanaanka in ay bilaabi doonaan Lugood iyo socodka hawsha oo idil waa Khasaarteen.
Waa arrin aad muhiim u ah in ay gurmad ah maktabadda Lugood aad meel kale. Waxaa jira meelo kala duwan in qofka uu ku yeelan karo maktabadda Lugood ah ku taageeray meelahaas waxaa ka mid ah: daruur, dibadda ama qalab kale. Lahaanshaha hayaan badan ay xaqiijin doonaan in dadka isticmaala ammaan ah in aan waayi doonaan mid ka mid ah macluumaadka ay mustaqbalka dhow yihiin. Isticmaalka daruur sidii gurmad ah waa habka ugu haboon, laakiin dadka ayaa yaqaan isticmaalka drives dibadda. Haddii aad rabto in aad soo celin maktabadaha Lugood ka drive dibadda isticmaalaya TunesGo ku raacayaa tallaabooyinka soo socda ee fudud:
Talaabada 1: . Connect qalab inankeeda la your computer iyo abuurtaan codsiga TunesGo iyo ka dib markii ay si guul ah ayaa helay la daaqad arbushin ilaa doona.
Talaabada 2: On bidix ee suuqa waxaa menu ah liiska, warbaahinta la xusho oo menu jiido hoos ah ayay u muuqan doonaan, markaas maktabadaha muuqan doonaa oo menu sarre. Dooro dhoofiyo oo aad dooran kartaa dhoofinta maktabadda Lugood iyo markaas ku dhameysan
> Resource > Lugood > Sidee inuu ka soo kabsado maktabadda Lugood